Uhlobo luni lwamanzi asekhaya angenamanzi futhi anemvelo enhle? - Isazi seZD Floor
Ikhaya > Uhlobo luni lwamanzi asekhaya angenamanzi futhi anemvelo enhle?
Hlela: UDenny　2019-12-11　Iselula
Uma phansi kwekhaya kudinga ukuba kungabi manzi futhi kube nemvelo, kunconyelwa ukuthi ucabangele indawo yokukhiya ye-SPC. Isikhala sokukhiya i-spc hhayi nje kuphela sinezinzuzo zokuvimbela amanzi nokuvikelwa kwemvelo, kodwa futhi sinezinzuzo eziyi-8 ezilandelayo:
1. I-Super anti-slip: Isendlalelo esingavimbeli sakhiwo sokukhiya se-SPC sinempahla ekhethekile yokulwa ne-slide. Uma kukhulunywa ngamanzi, unyawo luzizwa lunenkanyezi futhi akukho lula ukushelela.
I-2, efudumele futhi ekhululekile: amandla amahle okushisa kanye nekhono lokushisa ukushisa, ukuhlanza ukushisa okufana, ukupholisa ukonga amandla kuqala.
3. Umshuwalense-ubufakazi: I-Polyvinyl chloride ayinabuhlobo bamanzi, futhi ngeke ithungwe ngenxa yomswakama ophezulu.
4. I-Ultra-light and Ultra-nyembamba - Iphansi yokukhiya le-SPC livame ukuba phakathi kuka-3,2- 12mm ubukhulu nokukhanya okuyisisindo. Inenzuzo ezingenakuqhathaniswa ekwakheni ukuthwala umthwalo kanye nokugcina isikhala ezakhiweni eziphakeme kakhulu, futhi inezinzuzo ekwakhiweni kabusha kwesakhiwo esidala Izinzuzo ezikhethekile.
5. Ukuphepha okuphezulu: i-SPC floor ine-alamu enhle yokutholwa ngaphansi komthelela wezinto ezisindayo, futhi izinyawo zayo zizizwa zikhululekile .. Kuyaziwa ngokuthi "igolide eliphansi lomhlabathi" ukunciphisa umonakalo emzimbeni womuntu kusuka emhlabathini, futhi kungasabalalisa ukulimala kwezinyawo. Mthuke.
I-6, Imithi engagugi kakhulu: Ingaphezulu lesikhala sokukhiya se-SPC sinesendlalelo esikhethekile sobuchwepheshe bokuphamba okuphezulu. Iminyaka engama-50.
7. Ukumuncwa komsindo nokunciphisa umsindo: Umphumela wokufakwa komsindo we-SPC floor ungafinyelela ngaphezu kwama-decibel angama-20, angaqhathaniswa nezinye izinto ezijwayelekile zomhlaba, okwenza ikhaya lithule.
I-8, ukubuyiselwa komlilo: akunakuba yimvelo, ayakhiqizi amagesi anobuthi futhi alimazayo.
Uhlobo luni lwamanzi asekhaya angenamanzi futhi anemvelo enhle? Okuqukethwe okuhlobene